1982 – Year – Alpha Premium
Gandhi (1982) ##unicode ဒီကားကတော့ အိန်ဒိယရှနေ့တေဈဦးဖွဈပွီးကိုလိုနီဆနျ့ကငျြရေးနိုငျငံသမားတဈဦးဖွဈတဲ့Mohandas Karamchand Gandhi အကွောငျးရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။South Africaကနေ လှတျလပျရေးလှုပျရှားမှုတှစေတငျပွုလုပျခဲ့ပွီးအိန်ဒိယလှတျလပျရေးကိုပါရအောငျယူနိုငျခဲ့သူတဈဦးလဲဖွဈပါတယျ။ သူ့ကြှနျဘဝကရြောကျနတေဲ့ မိမိနိုငျငံကိုအကွမျးဖကျမှုမရှိဘဲလှတျလပျတဲ့နိုငျငံတဈခုဖွဈအောငျကွိုးစားအကောငျအထညျဖျောခဲ့တဲ့လူတဈယောကျအကွောငျးကို ထဲထဲဝငျဝငျရိုကျပွထားတဲ့ဇာတျကားဘဲဖွဈပါတယျ။လူမြိုးရေးခှဲခွားမှုမရှိဘဲနဲ့ငွိမျးခမျြးတဲ့အိန်ဒိယနိုငျငံကိုတညျဆောကျဖို့ ကွိုးစားခဲ့တဲ့Gandhiရဲ့အနဈနာခံမှုတှကေိုလဲတှမွေ့ငျရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာ British တှအေုပျခြုပျမှုအောကျကရြောကျနတေဲ့အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့အခွအေနကေိုလဲတှမွေ့ငျရမှာဖွဈပွီး ပွညျသူတှရေဲ့လှတျလပျရေးကွိုးပမျးမှုတှကေိုလဲတှမွေ့ငျရမှာဖွဈလို့ကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ကားကောငျးတဈကားဖွဈတာကွောငျ့ အမြားကွီးမညှနျးတော့ပါဘူး။ဒီကားနဲ့ရထားတဲ့ဆုတှကေလဲအမြားကွီးမို့ကွညျ့ရှုဖို့တနျတဲ့ကားတဈကားဖွဈမှာသခြောပါတယျ။ ##zawgyi ဒီကားကတော့ အိန္ဒိယရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ပြီးကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးနိုင်ငံသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့Mohandas Karamchand Gandhi အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။South Africaကနေ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးကိုပါရအောင်ယူနိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကျွန်ဘဝကျ​ရောက်နေတဲ့ မိမိနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို ထဲထဲဝင်ဝင်ရိုက်ပြထားတဲ့ဇာတ်ကားဘဲဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့Gandhiရဲ့အနစ်နာခံမှုတွေကိုလဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ British တွေအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကျရောက်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်လို့ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တာကြောင့် အများကြီးမညွန်းတော့ပါဘူး။ဒီကားနဲ့ရထားတဲ့ဆုတွေကလဲအများကြီးမို့ကြည့်ရှုဖို့တန်တဲ့ကားတစ်ကားဖြစ်မှာသေချာပါတယ်။ Review – Myet Chel File Size – 2.8GB Format…mp4 Quality : 1080p Blu-ray Genre :Biography, Drama, History Subtitle : Myanmar Subtitle (Soft sub) Translated by Myet Chel Encoded by Arrow
IMDB: 8.0/10 216,995 votes
Rambo – First Blood (1982) Rambo ဆိုတာနဲ့ ခေါငျးမှာ အဝတျစညျးပွီး M60 ကွီးကိုငျထားတဲ့ Stallone ပုံကိုပွေးမွငျကွမှာသခြောပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ဒီကားနဲ့အထူးမိတျဆကျပေးစရာမလိုတော့ဘူးထငျပါတယျ။ IMDB Rating 7.7 ရရှိထားတဲ့ဇာတျကားလေးပါ။ အကျရှငျကားပရိတျသတျတှအေတှကျ အတျောအကွိုကျတှကွေ့မှာသခြောပါတယျ။ ကွညျ့ပွီးသူတှမြေားမယျဆိုပမေယျ့ မကွညျ့ရသေးတဲ့သူတှအေတှကျ ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးပွောပါဦးမယျ။ ဗီယကျနမျစဈပွနျတဈယောကျဖွဈတဲ့ John.J. Rambo ဟာ အိမျခွရောမဲ့လြှောကျသှားနသေူတဈယောကျဖွဈနပွေီး သူ့ရဲ့တဈဦးတညျးသောစဈပွနျသူငယျခငျြးဆီ သှားတဲ့အခါ သဆေုံးသှားကွောငျးကိုကွားလိုကျရပါတယျ။ လလှေငျ့နရေငျး နယျမွို့လေးတဈမွို့ကိုရောကျသှားပွီး အဲဒီမွို့က ဒသေခံရဲမှုး နဲ့ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ အာဏာအလှဲသုံးစားလုပျပွီး မရှိတဲ့အမှုကိုရှာကွံပွီး တရားစှဲဖို့ကွိုးစားနပွေီး အနိုငျ့အထကျလုပျတာကိုခံရတဲ့အခါ ရဲစခနျးက ထှကျပွေးခဲ့ပါတယျ။ သူ့အသကျကိုသတျဖို့ကွိုးစားလာတဲ့အထိဖွဈလာတာကွောငျ့ ပွနျလညျတုံ့ပွနျခဲ့ပုံကိုတော့ ဇာတျကားမှာကွညျ့ပါဗြာ။ [Zawgyi] Rambo ဆိုတာနဲ့ ခေါင်းမှာ အဝတ်စည်းပြီး M60 ကြီးကိုင်ထားတဲ့ Stallone ပုံကိုပြေးမြင်ကြမှာသေချာပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဒီကားနဲ့အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။ IMDB Rating 7.7 ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ။ အက်ရှင်ကားပရိတ်သတ်တွေအတွက် အတော်အကြိုက်တွေ့ကြမှာသေချာပါတယ်။ ကြည့်ပြီးသူတွေများမယ်ဆိုပေမယ့် မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးပြောပါဦးမယ်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပြန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ John.J. Rambo ဟာ အိမ်ခြေရာမဲ့လျှောက်သွားနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောစစ်ပြန်သူငယ်ချင်းဆီ သွားတဲ့အခါ သေဆုံးသွားကြောင်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ လေလွင့်နေရင်း နယ်မြို့လေးတစ်မြို့ကိုရောက်သွားပြီး အဲဒီမြို့က ဒေသခံရဲမှုး နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး မရှိတဲ့အမှုကိုရှာကြံပြီး တရားစွဲဖို့ကြိုးစားနေပြီး အနိုင့်အထက်လုပ်တာကိုခံရတဲ့အခါ ရဲစခန်းက ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့အသက်ကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အထိဖြစ်လာတာကြောင့် ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပုံကိုတော့ ဇာတ်ကားမှာကြည့်ပါဗျာ။
IMDB: 7.7/10 224,497 votes
Rambo – First Blood (1982)
IMDB: 6.5/10 3,273 votes
IMDB: 6.4/10 1,094 votes